Garbati iyo Medusa oo madaxa Perseus gacanta ku haya | Abuurista khadka tooska ah
Marka hore tan farshaxan Medusa oo gacanta ku sita madaxa PerseusMarka laga reebo abuurista nooc kasta oo khilaaf ah sababo la xiriira goobta ay ku taallo, waa tusaalaha ugu dambeeya ee sida loola dhaqmayo jirka haweeneyda qaawan ee farshaxanka.
Maalmo yar gudahood halkaas oo galmada galmada ee jirka haweeneydu tahay goob dagaal, shaqadani waxay si aad ah u cadaynaysaa sida jidhka haweenay qaawan u eg tahay oo ay la socoto qaab farshaxan si farshaxan leh loo dhisay iyo farriin ka badan oo muuqata.
Asymmetry ee qaababkeeda, khafiifnimadiisa iyo sida dhabta ah ee ay tahay, iyo farriinta uu sido isagoo ka beddelaya quraafaadkii Giriigga ee Medusa, waxaa laga helaa agagaarka maxkamadaha Manhattan; halkaas oo soo saare Harvey Weinstein uu la tacaalayo caddaaladda oo uu dhiirrigeliyey #metoo.
Cinwaan looga dhigay sida Medusa oo leh Madaxa Perseus, 7 farshaxan oo naxaas ah Waxaa lagu gartaa timahaas masaska ka buuxa, seefta mid ka mid ah gacmaha iyo madaxa Perseus ee gacanta kale.
Un shaqadii uu qabtay Luciano Garbati sanadkii 2008, oo loo qaaday dhiirrigelinta farshaxankii Perseus ee madaxa Medusa ee Benvenuto Cellini (1545-1554). Labada shaqoba waxay salka ku hayaan quraafaadkii Giriigga ee Ovid's Metamorphosis, oo ah gabay ka kooban 15 buug oo ka sheekaynaya taariikhda adduunka laga soo bilaabo abuurkeedii ilaa caabudkii Julius Caesar.
Dhab ahaantii, ka Taallada Garbati waxay caan ku noqotay dhaqdhaqaaqa #metoo ee 2018 ayagoo banaanka soo dhigaya dambiyada galmada ee soo saaraha filimka Weinstein. Waana tii 2018, muuqaal ah shaqadii Garbati oo lagu faafiyay baraha bulshada oo lagu qoray "Ku mahadnaq inaan kaliya doonayno sinnaan ee aanaan aargudan."
Una shaqada buux dhaafiya xaqiiqada qaababka taasina waa habka ugu wanaagsan ee lagu muujiyo jirka dhabta ah ee aadanaha ee haweenka. Waxaan kaaga tagi doonaa adiga Farshaxanka gacmo-la’aanta ah ee Louvre.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Muranka iyo xaqiiqda farshaxanka Medusa ee ah halka dheddigga aan lagu galmoodin
Sidee aqoonsiga muuqaalka ee summad loo dhisay